'अब नेपाली भलिबलले नयाँ उचाई लिन्छ' - Khelpati
शुक्रवार, फाल्गुन १४, २०७७
'अब नेपाली भलिबलले नयाँ उचाई लिन्छ'
सोमवार, भदौ २, २०७६ विश्वास थापा
भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो । मात्र राष्ट्रिय खेल । राष्ट्र चिनाउने खेल भएपनि भलिबलले राज्यका लागि कहिल्यै बिशेष रहेन, सहयोग पाएन, सहुलियत पाएन । सधै गुनासो, अभाव र सम्भावनाको गर्भमा हुर्किरह्यो ।
भौगोलिक विविधताले भरिएको नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा खेलिने भलिबल घरेलु खेलकुदमा लोकप्रिय समेत छ । तर यसको लोकप्रियताले व्यवसायीकता र सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । हेर्दा लाग्छ, यसले अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ ।
राज्यको लगानी छैन । गतिलो नेतृत्व छैन । सोही कारण भलिबल ब्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुन संघर्षरत छ ।
तर आज एक ऐतिहासिक दिनको अवसर छ । नेपालले खेलकुद ईतिहासमा पहिलो पटक एउटा ठुलो भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुदैछ । त्यसको नाम एभिसी सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप रहेको छ । हुन त यो पाँचौ संस्करण हो । मध्य एसियाली मुलुक सहभागी हुने प्रतियोगिता नेपाल पहिलो पटक आयोजना गर्दैछ ।
हुन सक्छ, प्रतियोगिताको आयोजनाले भलिबलको विकास, प्रवद्र्वन र प्रचारमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । तर मुख्य कुरा एभिसी सेन्ट्रल जोनको आयोजना र सहभागीताबाट नेपाली भलिबल एक कदम अगाडी बढ्नेछ । सोमबार सुरु हुने प्रतियोगिताको सफल आयोजना मात्र होईन, राम्रो प्रर्दशन गरेर नतिजा समेत निकाल्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई छ ।
नेपालले आयोजना गर्न गईरहेको एभिसी सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल प्रतियोगिता कस्तो खालको प्रतियोगिता हो ? यसको आयोजनाले नेपालको भलिबल क्षेत्रमा कस्तो महत्व र प्रभाव राख्छ ? प्रतियोगिता आयोजनाको चुनौती र सम्भावनाका बिषयमा नेपाल भलिबल संघकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केसंग खेलपाटीकर्मी विश्वास थापाले कुराकानी गरेका छन् ।
एभिसी सेन्ट्रल जोन कस्तो खालको प्रतियोगिता हो ?
एसियाको सेन्ट्रल जोनमा रहेका देशहरु खेल्ने प्रतियोगिता एभिसी सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिप हो । हामीले प्रतियोगिताको पाँचौं संस्करण आयोजना गर्न लागेका छौ । गत संस्करणको प्रतियोगिता बंगलादेशमा भएको थियो ।
नेपाली भलिबलको ईतिहासमा पहिलो पटक हामी यति ठुलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न गईरहेका छौ ।
प्रतियोगिताको आयोजनाले नेपालको भलिबलमा कस्तो महत्व राख्छ ?
ठुलो अर्थ राख्छ । पहिलो कुरा नेपालले समेत यति ठुलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने छ । नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हो । यति ठुलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउँदा हामीले समेत धेरै सिक्ने मौका मिल्छ ।
दोस्रो कुरा नजिकिंदै गरेको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)का लागि प्रतियोगिताले धेरै सहयोग पुग्छ । खेलाडीको तयारी हुन्छ । यो प्रतियोगिताले हाम्रो टिमको अवस्था र स्तर थाहा हुन्छ । अर्को कुरा हामीले अन्तराष्ट्रिय टिमसंग खेल्दा एक्सपोजर समेत पाउँछौ ।
प्रतियोगिता आयोजना मात्र नभएर हामीले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा समेत गर्दैछौ । टिमको तयारी कस्तो छ ? कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्न सक्छौ ?
खेलाडीको तयारी राम्रो छ । रिसिभ, डिफेन्स र ब्लकमा केही समस्या देखिएको छ । अफगानिस्तानविरुद्वको मैत्रीपूर्ण खेलले हाम्रो कमजोरी पत्ता लागेको छ । दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा मुख्य दुई खेलाडी टिम बाहिर हुदाँ समेत नेपालले खेल जित्यो । त्यो राम्रो संकेत हो । यसले हाम्रो खेलाडी ठुलो टिमलाई टक्कर दिन सक्षम छन् भन्ने देखाएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि भनेर दुई महिना अघिबाट खेलाडी अभ्यासमा छन् । डच प्रशिक्षकले दैनिक रुपमा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिएका छन् । खेलाडीको प्रर्दशन र तयारीमा भलिबल संघ खुसी छ । खेलाडीको मेहनतबाट प्रशिक्षक समेत खुसी छन् । लामो समयको प्रशिक्षण पाउँदा खेलाडी समेत खुसी भएको पाएका छौ ।
प्रतियोगिताबाट नेपालको कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्न सक्छौ ?
पहिलो कुरा प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडीले बटुल्ने भनेको अनुभव हो । नेपाली खेलाडीले प्रतियोगिताबाट अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर पाउनेछन् । घरेलु खेलकुदमा व्यस्त खेलाडीले विदेशी टिम र खेलाडीसंग खेल्न गइरहेका छन् ।
खेलाडीबाट हामीले सेमिफाईनल हुँदै फाईनलसम्मको आश गरेका छौ । बाँकी कुरा खेलाडीको प्रर्दशनमै निर्भर रहन्छ ।
हिमाल, पहाड र गाउँ घरमा लोकप्रिय भलिबल पछिल्लो समय शहर बजारमा समेत विस्तार हुदैछ । पुरुषको तुलनामा महिला भलिबलको लोकप्रियता प्रतियोगितामा देख्न सक्छौ । दक्षिण एसियामा नेपालको पुरुष भलिबलको अवस्था कस्तो छ ?
यसअघि हामीले नेपालमै दक्षिण एसियाली पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियौ । घरेलु भुमिमा भएको प्रतियोगितामा नेपालले काँस्य जितेको थियो ।
अरु अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा खासै उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौ । विस्तारै हामी अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जोडिन थालेका छौ । आशा गरौ अब पुरुष भलिबल टिमले निराश बनाउने छैन ।
हामी विस्तारै अघि बढ्दै छौ । ठुलो दाबी केही छैन । तर यस्तै खालको प्रतियोगिता आयोजना र सहभागीताबाट हाम्रो स्तर माथी उठ्छ ।
एभिसी सेन्ट्रल जोनको आयोजना र सहभागीता पश्चात घरेलु भलिबलमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला भन्ने लागेको छ ?
प्रतियोगिता आयोजनाबाट ठुलो फाईदा खेल र खेलाडीलाईनै हुन्छ । खेलाडीले अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतिद्वन्दीसंग खेल्न पाउँछन् । खेलाडीले नयाँ अनुभव लिन पाउँछन्, दिन पाउँछन् । एक हिसावले यस्तै प्रतियोगिताले खेलाडीको क्षमता र अनुभव साटासाट हुने गर्छ ।
अर्को कुरा भलिबलको प्रचार र प्रवद्र्वनमा प्रतियोगिताले टेवा पुर्याउँछ । घरेलु खेलकुदमा भलिबलका धेरै प्रतियोगिता आयोजना हुने गर्छ । ठाउँ ठाउँमा भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुदै आएको छ ।
तर अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा नेपालको भलिबलको समेत अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुने गर्छ । नेपालले समेत भलिबलको यति ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय खेलकुदको क्षेत्रमा जान्छ ।
ठुला प्रतियोगिताको आयोजना आफैमा चुनौतीपुर्ण हुन्छ । यसको व्यवस्थापन पक्षको चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो निकै गाह्रो बिषय हो । संघले समेत यसलाई निकै चुनौतीपुर्ण रुपमा लिएको छ । राष्ट्रिय खेल भएर समेत सरकारबाट ठुलो सहयोग पाएका छैनौ ।
अर्को कुरा हामीसंग खेल्नका लागि आफ्नै एउटा कभर्डहल समेत छैन । तर उपलब्ध जति स्रोत साधन छ, त्यसलाईनै जुटाएर प्रतियोगिता आयोजना गर्न गईरहेका छौ ।
यति ठुलो अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै गर्दा आफ्नै कभर्डहल नभएर आर्मीको कभर्डहलमा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौ । त्यहाँ विभागको छुट्टै नियम छ । त्यही नियममा बाँधिएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती हामीसंग छ ।
अर्काे पक्ष भनेको सबै क्षेत्रमा सहयोग भईरहेको छ । भलिबललाई माया गर्ने सहयोगी हातहरु सधै जुटिरहेका छन् । यस्तै खेलको आयोजनाबाट खेलको विकासमा टेवा पुग्छ । विस्तारै भलिबलले यसले गति लिदैछ भन्ने लाग्छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा प्राविधिक समस्या कत्तिको आउँदा रहेछन् ?
निकै गाह्रो हुने रहेछ । सबै अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार गर्नुपर्ने रैछ । हामीले यसअघि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको थियौ । तर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सोही अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने रहेछ ।
एभिसी सेन्ट्रल जोनका लागि एफआईभीभी र एभिसीबाट प्रतिनिधिहरु नेपालमा छन् । उनीहरुले निरन्तर निरिक्षण र अवलोकन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सबै प्राविधिक बिषय हेरिरहेका छन् ।
हामी समेत एफआईभीभी र एभिसीको नियम अनुसारनै प्रतियोगिता आयोजना गर्न गईरहेका छौ । भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्दै प्रतियोगिता सफल पार्ने उद्वेश्यमा छौ ।
फुटबल, क्रिकेटको तुलनामा भलिबलले कुनै ठुलो अन्तराष्ट्रिय अनुदान पाएको देखिदैन । तर यस प्रकारको ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्न कसरी सम्भव भएको छ ?
यहीनै भलिबलको बिशेषता हो । भलिबल संघसंग ठुलो केही थिएन, र छैन पनि । तर हामीसंग हिम्मत र हौसला छ । हामीसंग संगठन छ, संघमा एकरुपता छ, हामी एकजुट छौ ।
परेका बेला गछौ भन्ने भाव भएका साथी छौ । खेलाडीकै लागि केही गछौ भनेर हामी संघमा आएका हौ । खेलाडीका लागि हामीले जसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग मागेका छौ, सहयोग आएको समेत छ । अहिलेसम्म यस्ता कार्यक्रम आयोजना नभएकाले अरुले समेत चासो नदेखाउनु भएको हो । अब बिस्तारै सबैको ध्यान भलिबलमा पनि पर्छ । एभिसी च्याम्पियनशिपले भलिबलमा नयाँ उचाई थप्ने काम गर्छ । भविष्यमा राम्रो नतिजा निस्कन्छ भनेर हामीले प्रतियोगिता आयोजना गरेका हौ ।
अन्तिममा नेपालमा रुचाईएको खेल हो भलिबल । एभिसी सेन्ट्रल जोनको आयोजनाबाट नेपाललाई के फाईदा पुग्छ ?
नेपाली खेलाडीसंग पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्षमता छ । प्रतियोगिताले यसलाई प्रस्फोटित गर्छ । अर्को कुरा नेपालले समेत यस्ता ठुला कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ ।
भलिबलका समर्थकले समेत आफ्नै घरमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेल र खेलाडीको प्रर्दशन देख्न पाउँछन् । टिभीमा हेरिरहेका उच्च स्तरको भलिबल खेल नेपाली भलिबलका समर्थकले आफ्नै आँखा अगाडी देख्न पाउँछन् । यसले नेपाली भलिबलको लोकप्रियता र दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनेछ ।
र नेपालले यस्तो प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ । समर्थकको लागि पनि अन्तराष्ट्रिय लेबलको खेलाडीले आफ्नो घर आगनमा खेल्न पाउनु ठुलो कुरा हो । टिभीमा देखिरहेको अन्तराष्ट्रिय खेलाडीलाई आफ्नै आखा अगाडी खेलेको देख्न पाउँदा सबै समर्थकलाई पनि रमाइलो नै लाग्छ ।
‘गोल्डेन एथ्लेटिक्स मिट’ फागुनमा
महेश स्मृति भलिबल : विधान स्पोर्ट्स र गलकोटको जित
बागमती प्रदेश फुटबलको तदर्थ समिति गठन